लक्ष्मी आचार्यको खत्रा फोटो प्रकाशित ! तिखो शब्दको प्रहार «
लक्ष्मी आचार्यको खत्रा फोटो प्रकाशित ! तिखो शब्दको प्रहार
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०६:१५
काठमाण्डौ- भनिन्छ, पुजिबादी बजारमा आशुको बिक्री गरिन्छ, यो त सामान्य हो । आज हामिले एक साप्ताहिकले प्रकाशित एक मोडेल लक्ष्मी आचार्यको फोटो सेसनको सामाजिक सन्जालामा आएको कमेन्ट लाई लिएको छौ । झण्डै २ दशक देखी नेपाली संगीतको क्षेत्रमा सक्रीय डक्टर किरातले सामाजिक सन्जाल राखेको यस तस्बिर र स्टाटसमा आएको कमेन्टलाई लिएको छौ ।
डाक्टर किरात लेख्छन ‘एउटालाइ चल्नु छ अर्कोलाइ चलाउनुछ किनबेचको दुनिया बराबरी। कस्लाइ भनौ ए… हाम्रा छोरीचेलि बचाउनु कसोगरि … ?’ यस पोस्टमा गायक कन्काईष्ट राई तर्सिने शैलिमा ‘हैट्’ भनेको छन भने गायिका शिला राई ‘कुकुरनै सेन्टिफ्यालट भएछ हौ मुइयालाई देखेर, हेर्नुन कुकुरको आँखा’ भनि टिप्पनी गरेकी छिन ।
अजय नेपाली लेख्छन, ‘त्यो कुकुरलाई हेर स्वास नै फेर्न सकेको छैन कहाँ गए हौ पशु अधिकारकर्मिहरु’ भनि कमेन्ट गरेको छ । त्यस्तै गरी टन्क समबाहङ्फे लेखछन, ‘यो त युरोपलाई नै मात ख्वाउने तस्बिर आयो मोडेलको’ । अर्को सुजता थापा लेख्छन, यस्ता लाई छुन सम्म पनि डराउछ्न मान्छे, मारिने लुटिने त छ महिनाको बालिका देखि सोझा साझा नारी र वृद्ध महिलाहरु मात्र हुन’ भनि टिप्पनी गरेकी छिन ।
कबिराज पुम मायालु लेखछन्स्, ‘यसलाई कन्चनपुर पठाउन पाए निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्थ्यो कि ?’ त्यसतै गरी श्रीकारीश्न अधिकारि लेख्छन, ‘यस्तो प्रकृतिको छाडा अङ्ग प्रदर्शनवाट समाजमा अपराधिलाई उत्तेजनामा ल्याएर बलत्कारका घटना घट्न मलजल गरिरहेको छ ।’ प्रत्रकार ईन्द्र जिजिबिशा लेख्छन, ‘ब्रा र पेन्टी पनि छैन जस्तो छ ?’ टिकाराम राई लेख्छन, ‘यस्ले बिकृती फैलाईरहेको छ, देश निकला गर्नुपर्छ यस्तलाई चाहिदैन मोडेल मोडेल भन्दै नाङ्गिएर फोटो खिचिएर हाल्नु पर्ने ?’ भनि कमेन्ट गरेको छन ।
राकेश राई लेख्छन, ‘देश नेताले सकाए, कलाकारिता र पत्रकारिता यिनीहरुले ।, त्यस्तै गरी समाज सेबी नैन जेरुङ लेख्छन्, ‘निशब्द ।’ खेलप्रेमी तथा समाजसेबी महेन्द्र राई लेख्छन, ‘सबैलाई हेर्नु छ । अनि आनन्द लिनु छ । यहाको चलन नै यस्तै छ । चुपचाप बस्नु बाहेक अरु नै के छ ?’ अर्को सङ्बुङ होङ्मा लेख्छन, ‘आबो हाम्रो देशमा कृषि बैज्ञानिक मदनराईज्युको विश्लेषण र कामहरु बिस्तारै साबिक हुनेछन । र, यो न्यु जेनेरेसनले चाहेको पनि मदनराई नै हुन किनकि उनले बिश्व घुमेर सबै कुराहरुको अनुभव गर्नु भएकोछ । वहालाई जगत गुरुको नामले पनि चिन्न सकिन्छ । वहाको अन्तरवार्ता सबैले १ चोटि सुन्नुस सुन्दा नराम्रो भएता पनि समाजमा यथार्थ छ ।’ भनि कमेन्ट गरेको छन ।
पुर्बेली जुनतार लेख्छन, ‘गाला पनि चाउरी पर्न लाग्यो, धेरै गरे तर राम्रो किहि गरिनछु जे गर्दानी नहुनी, जे गरेनी नहुनी, अब मर्न भन्दा बहुलाउनु निको भनेर यस्तो गति छोडेको होला सायद!’ । त्यस्तै गरी बिरेन्द्र राई लेख्छन, पुजिबादमा मानिसहरुको चाहना पैसा पहिलो। पैसाको लागि नाङ्गो हुने कुनै सिमाना हुदैन । जति सर्वस्व नाङ्गो हुन सक्यो त्यति ठुलो तक्मा मिल्छ। केहि दिन पछि हेर्नु होला महोदय, तक्माको वजनले मोडलको गर्धन नै भाचियो शिर्षकमा समाचारको पाठक हामि नै भइन्छ ।’ हो भनि तिखो शब्द प्रहार गरेको छन ।
अन्तमा, ग्लामर हुनुपर्दछ तर ग्लामरको रुपमा कपडा बिहिन हुन राम्रो होईन । राम्रो कलाकार र मोडेल अङ्ग प्रदशन गर्दैमा राम्रो हुने होईन, बिकाउ होला टिकाउ हुँदैन । भिउस होला दिर्घ दर्शक हुँदैन ।